Arkiifiyadaha Caalamiga ee Ganacsiga - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: Ganacsiga caalamiga ah
Hoggaamiyeyaasha Washington waxay diiradda saarayaan sidii fursado ganacsi oo caalami ah loogu furi lahaa ganacsiyada yaryar
Ganacsigu hadda wuxuu ku leeyahay matalaad dalka gudihiisa ah 10 dal oo gacan ka geysanaya ganacsiyada yaryar ee gobolkeenna inay ku koraan dhoofinta iyo iskaashiga ganacsi ee caalamiga ah Xisaabta ayaa iska hadasha. Fursadaha dhoofintu waa fursad guul u ah ganacsiyada Washington. Shaqooyinka: Ugu yaraan afartii shaqaba mid ka mid ah gobolka Washington wuxuu ku xiran yahay dhoofinta. Dhaqaalaha gobolka ayaa si dhow ula jaan qaada ganacsiga caalamiga marka loo eego dowlad kasta oo kale. · Suuqyada: In ka badan 80% ka mid ah
UPDATE: Dagaallada Ganacsiga iyo canshuuraha
Toddobaadyadii la soo dhaafay, siyaasadaha ganacsiga, canshuuraha iyo falalka aargoosiga ah ayaa ku jira wararka maalin kasta. Dhaqaalaha gobolka Washington wuxuu diiradda saarayaa ganacsiga caalamiga ah marka loo eego gobolada kale ee Mareykanka - ku dhowaad 40 boqolkiiba shaqooyinka halkan waxay kuxiran yihiin ganacsiga. Taasi waxay soo jiidatay indhaha warbaahinta maxalliga ah, kuwa caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay fahmaan waxa siyaasadaha iyo tallaabooyinka Maamulka Trump ay uga dhigan yihiin ganacsiyada iyo shaqaalaha Mareykanka. Wareegii ugu dambeeyay
Daacadnimo, falanqeyn feker ah oo ku saabsan saameynta siyaasadda ganacsiga ee loo baahan yahay markii loo dhowaanayo isbeddelada NAFTA
Agaasime Bonlender wuxuu hadaladan ka sheegay Feb. 20, 2018 munaasabad ay soo qabanqaabiyeen Ururka Qunsuliyadaha ee Washington. Marka hore, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Petra Walker oo igu casuumay xafladan galabta iyo Qunsuliyada Ururka Washington ee martigalinaysa wadahadalkan muhiimka ah. Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa in Qunsulka Guud Dondisch oo metelaya Mexico iyo Qunsulka Guud Brandon Lee oo wakiil ka ah Kanada ay waqti geliyeen halkaan fiidkan.
Waftiga Gobolka Washington waxay ganacsi cusub ka raadinayaan Dubai Airshow
Isutaga Imaaraatka Carabta waa mid kamid ah suuqyada ugu waaweyn aduunka ee diyaaradaha rayidka iyo militariga OLYMPIA, WA - Wafdi ka kooban 12 xubnood oo ay qortay oo ay hogaamineyso Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa aadaya dhamaadka todobaadkan magaalada Dubai ee Isutaga Imaaraatka Carabta, halkaasoo noqotay mid kamid ah kuwa ugu waaweyn. hawada caalamiga ah. Wakiilo ka socda sagaal shirkadood ayaa ku soo bandhigi doona bandhigga Dooro Washington ee USA Pavilion, iyo Ganacsiga wuxuu matalayaa laba shirkadood oo dheeri ah, the
Gobolka Washington wuxuu helaa $ 900K SBA deeq si kor loogu qaado dhoofinta ganacsiga yaryar
In ka badan $ 512 milyan oo iib ah oo loo aaneynayo Barnaamijka Ballaarinta Ganacsiga Gobolka (STEP) tan iyo markii la aasaasay OLYMPIA, WA - Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka (SBA) ayaa ku abaalmariyay Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington sanad lixaad oo maalgelin ah si looga caawiyo ganacsiyada yaryar ee gobolka inay ku koraan dhoofinta. . Deeqda $ 900,000, oo qayb ka ah Barnaamijka Ballaarinta Ganacsiga Gobolka ee SBA (STEP), ayaa ah tan ugu badan uguna badan ee laga bixiyo wadarta $ 18 milyan ee dalka oo dhan.
Soosaarista Wararka: Ganacsigu wuxuu hogaaminayaa wafti ka socda Amsterdam si ay ugu soo bandhigaan METSTRADE qalabka badda soo bandhiga Nov. 15-17
Wefdiga ay hogaamineyso gobolka Washington ayaa markii ugu horeysay sameynaya, waxay raadinayaan inay suuq galiyaan Yurubta, suuqyada qalabka baddaha adduunka oo ay kujiraan shirkado casri ah oo Puget Sound ah oo kala ah Basta Boatlifts iyo Pure Watercraft. Olympia, Wash - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay bilaabeysaa markii ugu horreysay ee rasmi ah ee gobolka METSTRADE, oo ah bandhigga ganacsiga badda ee adduunka ugu weyn, berri magaalada Amsterdam. Alaabooyinka cusub ee suuqa doonida madadaalada ee Basta Boatlifts oo saldhigeedu yahay Bellevue iyo Seattle oo saldhiggeedu yahay Pure Watercraft ayaa iftiimin doona “Dooro
Release News: Ganacsigu wuxuu hogaaminayaa waftiga MEDICA 2016 ee Dusseldorf, Jarmalka Nov. 14-17
Sideed shirkadood oo ka tirsan waftiga uu hogaaminayo gobolka Washington ayaa ku biiraya ugu yaraan 10 shirkadood oo kale oo maxalli ah oo si madax-bannaan u muujinaya bandhigga ganacsiga warshadaha caafimaadka adduunka ugu weyn. OLYMPIA, WASH - Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay aadeysaa Dusseldorf, Jarmalka isbuuca soo socda si ay u soo bandhigaan tikniyoolajiyad casri ah oo ka socota warshadaha sayniska nolosha ee gobolka ee MEDICA, oo ah ganacsiga ugu weyn adduunka ee dhinaca caafimaadka. Sayniska nolosha Washington iyo waaxda caafimaadka adduunka waa mid firfircoon